Dagaaladii Gobolka Amxarada oo deegaamo badan kufiday. | ogaden24
Dagaaladii Gobolka Amxarada oo deegaamo badan kufiday.
Dagaalo khadhaadh oo kasocda bariga Gobolka Gonder ayay maleeshiyada wax iska caabinta Amxarada iyo kuwa Ginbot -7, Gudaha ugu Galeen saldhiga ciidamada Woyanaha ee degmada Kafta Humera ee dhulka Wolqayt oo horay uga tirsanayd Gobolka Gonder hadase dhinaca Tigreega raacsan.
Wariye kusugan dhulka Amxarada oo soo xiganaya Hogaamiye katirsan maleeshiyada wax iska caabinta Amxarada ayaa sheegay inay subaxnimadii hore ee shalay Gudaha u galeen lana wareegeen saldhigii ciidanka Woyanaha ee Kafta.
Warkani oo lagu baahiyay ESAT TV ayaa lagu sheegay in dagaal culus oo kadhacay duleedka iyo Gudaha degmada Kafta Humera, ay ugu dambayn maleeshiyada wax iska caabinta iyo kuwa Ginbot 7 kagaadheen Guul balaadhan ayna lawareegeen Fadhiisin ciidan.
Degmada Humera oo kutaala Bariga Gobolka Gonder ayaa maamulka Woyanaha ugu xisaabsan Gobolka Galbeed ee maamulka Tigrai, waxayna kamid tahay degmadani deegaamada ugu khayraadka badan dhulka laga boobay Qomiyada Amxarada.
Dagaalo 10-kii bari ee ugu dambaysay kasocday bariga iyo waqoyiga Gobolka Gonder oo u ay kali ku ahaayeen maleeshiyada wax iska caabinta Axmarada, ayaa waxaa Khasaare xoogan lagu gaadhsiiyay ciidamada Woyanaha waxaa se aad loo hadal haya in kubiirista dagaalka ee Ginbot 7- ay wax badan kabadali doonto Goobha dagaalka, maadaama ciidamada Woyanuhu aad uga niyad Jabsan yihiin dagaalada ay kula jiraan kooxaha mucaaradka ah.